ktmkhabar.com - देशैभर माओवादी मय बनाउने प्रचण्डको लक्ष्य, ३० लाख सङ्गठित सदस्य बनाउने उद्घोष !
देशैभर माओवादी मय बनाउने प्रचण्डको लक्ष्य, ३० लाख सङ्गठित सदस्य बनाउने उद्घोष !
देशै भर माओवादी मय बनाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको लक्ष्य रहेको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सङ्गठन सुदृढीकरण अभियानमार्फत करिब ३० लाख ९४ हजार १६८ सङ्गठित सदस्य, सदस्य र समर्थकलाई सङ्गठित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पार्टीमा जिम्मेवारी नपाएका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर सङ्गठनलाई सशक्त बनाउने माओवादीले निर्णय गरेको छ ।
असोज ६, ११, १२ र १३ गते सम्पन्न माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले केही नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । यसअघि कपिलवस्तु इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिइएका डोरप्रसाद उपाध्यायलाई केन्द्रीय कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । विभिन्न प्रदेशका रिक्त पदाधिकारी र अन्य केही संगठनात्मक निर्णय पनि भएको छ । जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ को सचिवमा हेमराज भण्डारी चयन भएका छन् भने प्रदेश २ को अध्यक्षमा प्रल्हाद बुढाथोकी र जोगबहादुर बर्बरिया यादव चयन भएका छन् ।